अन्तर्राष्ट्रिय ज्योतिष सम्मेलनद्वारा ज्योतिषी नवीन चौलागाई महासंघको प्रवक्तामा मनोनित Kasthamandap Daily
झापा । झापाको विर्तामोडमा अन्तर्राष्ट्रिय ज्योतिष तथा वास्तु सम्मेलन होटल ग्रानसिटीमा सम्पन्न भएको छ । विश्व ज्योतिष महासंघ त्यस्तै दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासंघ राष्ट्रिय समिति र नेपाल ज्योतिष परिषद्को आयोजनामा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । नेपाल तथा भारतका ख्यातिप्राप्त ज्योतिषीहरुको उपस्थिति रहेको महासंघले जानकारी गराएको छ । उक्त सम्मेलनले दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासंघ राष्ट्रिय समितिका नवीन चौलागाईलाई प्रवक्ताको रुपमा मनोनित समेत गरेको छ । मनोनित चौलागाई महासंघमा लामो समयसम्म ज्योतिषीहरुको हकहितका लागि आवाज उठाउदै आइरहेकाले पनि प्रवक्ता जिम्मेवारी पाएका हुन् । नेपाल तथा भारतबाट आएकाहरुलाई सम्मान गरेको छ ।
कार्यक्रममा नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष डा। रामचन्द्र गौतम, दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासंघका अध्यक्ष डा. सहदेब बिष्ट विश्व ज्योतिष महासंघका अध्यक्ष डा. लोकराज पौडेल, नेपाल ज्योतिष परिषद्का अध्यक्ष माधवराज पाण्डे दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासंघ नेपालका महासचिव सुरेश चन्द्र रिजाल लगाएका व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
पर्यटन वर्ष २०२० लाई प्रबर्द्धन तथा माता पाथिभराको दर्शनार्थी हरुलाई यस सम्मेलनले दर्शन गर्न आउनका लागि पनि विशेष आवाहन गरेको छ । कार्यक्रममा प्रदेश नवर एकका कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की र विर्तामोड नगर पालिकाका मेयर ध्रवकुमार सिवाकोटी लगायतका विशिष्ट व्यक्ति हरुको उपस्थित रहेको थियो ।
यस सम्मेलनले २०७७ सालमा एक महिना घटाएर ११ महिलाको क्यालेन्डर प्रकाशनमा जोड दिनेहरुलाई नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष डा. रामचन्द्र गौतमले महिना घटाएर ११ महिनाको क्यालेन्डर बनाउन कुनै पनि शास्त्रीय बिधान नभएकाले सम्पूर्ण ज्योतिषीहरुलाई एकजुट भएर प्रतिकार गर्न समेत आह्वान गर्नु भएको छ ।